यीनै हुन नेपाली इन्जिनियर : जसले दिनरात नभनी ठड्याए ऐतिहासिक धरहरा ! • raradiodarpan.com
यीनै हुन नेपाली इन्जिनियर : जसले दिनरात नभनी ठड्याए ऐतिहासिक धरहरा !
सारा काठमाडौं जब सुतिरहेको हुन्छ, इन्जिनियर रमण महतो रातभरि जागै हुन्छन् । र, त साढे दुई वर्षमै ठडिएको छ, काठमाडौंको शान, मान र गौरव बनेको ऐतिहासिक धरहरा ।त्यसो त धरहरा साढे दुई वर्षमै बनेको भने पनि पाँच वर्ष बराबर समय हो।
किनभने रमणले दिन पनि भनेनन्, रात पनि भनेनन् । नेपालमा ‘डे-लाइट कल्चर’ छ । तर यसमा रातदिन दुवै सिफ्टमा एकनाश काम भयो ।धरहरा निर्माणको कन्ट्र्याक्ट पाएका रमणलाई पक्कै थाहा थियो- सबैका नजर धरहरा परियोजनामै छ । २०७२ वैशाख १२ मा धरहरा ढलेपछिको खिन्नता उनी बुझ्थे । काठमाडौँको एकल पहिचान लगभग हराएको थियो।
भग्नावशेषतिर हेरेर टोलाउँथे काठमाडौँबासी । धरहरा सिर्फ भवन मात्र थिएन, देशकै धरोहर थियो । त्यसैले उनले रातदिन नभनीकन काम गरे ।त्यसो त धरहरा पुनर्निमाणको जिम्मा पाएको जीआईईटीसी–रमण कन्स्ट्रक्सन चाइनिज कम्पनीसँगको ज्वाइन्ट भेन्चर हो । तर यसको निर्माण नेतृत्व नेपालीले नै गरे । सिमेन्ट छड, गिटी बालुवा पनि नेपालकै प्रयोग गरिएको छ, प्रविधि विदेशी।
सिभिल हस्पिटल बनाइरहेको चाइनिज टोलीले नेपाली मौलिकता पक्कै महसुस गरेको थियो । नेपाली निर्माण टोली ३० वर्षसम्म देशबाहिर काम गरेको अनुभवी पनि थियो ।रमणको निर्माण कम्पनीको सत्प्रयासमा ६ वर्षमै धरहराले आफ्नो उचाइ पाएको छ।
वैशाख १२ गते नघाएको भए सात वर्ष लाग्थ्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर ११ गते नै लिफ्टबाट धरहराको २० औं तलामा पुगेर पुष्पवृष्टि गरी यसको उद्घाटन गरे ।संयोग के भने प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा ओलीले २०७२ फागुन ४ गते ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियान घोषणा गरेका थिए भने २०७५ पुस ५ गते उनले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा यसको शिलान्यास गरेका थिए।
धरहरा पुननिर्माणमा जीवनको महत्त्वपूर्ण समय सुम्पिएका सम्पूर्ण कामदारका परिवारलाई सम्मानस्वरुप आजीवन सदस्यता दिइनुपर्ने उनको मत छ ।धरहरा कति सुरक्षित होला त ? रमण आफूले ‘नढल्ने धरहरा’ बनाएको जिकिर गर्छन् । ‘निर्माण व्यवसायबाट अलग भइसकेका बुबा दिनभरि हेर्नुहुन्थ्यो । कामदारबाट त्रुटि होला भनेर मलाई निद्रा लाग्दैनथ्यो । राति दुई बजे पनि साइटमा जान्थें । जस्तोसुकै भूकम्प यसले धान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ धरहरामा एम–फिप्टी कंक्रिट आरसीसी टावर छ । यो क्रंकिट र डन्डी नकुहिन्जेल उभिन्छ । रोमन अम्पायरका भवन दुई हजार वर्षसम्म टिकेका छन् । म चाहन्छु, यो हजारौं वर्ष टिकोस् ।’